Uzakuhlala ngendlu iminyaka emithathu uBonginkosi Khanyile #FeesMustFall - Vernac News
January 28, 2019 May 3, 2020 Vernac News
EKapa – Itshantiliziyo le #FeesMustFall uBonginkosi Khanyile ugwetywe iminyaka emithathu ehlala ngendlu okanye isohlwayo samawaka amahlanu (R5000) esixhonywe iminyaka emihlanu.
Elitshantliziyo belijongene nezityholo zokuqhwaya udushe esidlangalaleni nokutyeshela imiyalelo yabakwantsasana ngexesha loqhankqalazo lwephulo lwemfundo yasimahla u#FeesMustFall kunya u-2016.
Isigwebo esixhonyiweyo sisigwebo sokuhlala ngaphandle kwentolongo ze umana ukuhlolwa ngamagosa weeNkonzo zoLuleko nemiqathango ethile ehamba noku.
UMantyi uSizwe Hlophe weNkundla yeSithili saseThekwini uyalele lo ka Khanyile ukuba makahlale ngendlu iminyaka emithathu apho azakumana ehlolwa rhoqo ngamagosa weeNkonzo zoLuleko phantsi komqathango ongqingqwa wokuba ukuba uke waphinda wona kwiminyaka emihlanu ezayo inkundla izakunyanzeleka inyanzelise ukuba avalelwe entolongweni.
Eminye imiqathango iquka ukuba enze umsebenzi woluntu, azimase izifundo zobhuchule bokuziphatha kwaye angathabathi ziyobisi. Ithuba azakuvunyelwa ngalo ukuba alishiye ikhaya lakhe kuxa esiya esikolweni kwiYunivesithi yaKwaZulu Natal, xa ezimasa izifundo zobhuchule bokuziphatha naxa esiyakwenza umsebenzi woluntu.
UKhanyile wazivuma zonke izityholo awayejongene nazo eziquka ukudubula amapolisa ngamatye ahlohlwe kwisilingi. Inkundla yadlalelwa ubungqina bomboniso oshicilelweyo oveza lo ka Khanyile esebenzisa esi silingi.
Kwinyanga ephelileyo uKhanyile wakhokhela iqela lamatshantliziyo elalisuka KwaZulu Natal ukuya kwiZakhiwo zoMdibaniso ePitoli liyokufaka isicelo sokuba uMongameli uCyril Ramaphosa axolele onke amatshantliziyo we #FeesMustFall ajongene nezityholo zolwaphulo-mthetho ezinxulumene nezintshukumo.
UKhanyile ayilotshantliziyo lokuqala le #FeesMustFall ukufumana isigwebo sokuhlala ngendlu. U-Amla Monageng owayengumfundi kwiYunivesithi yasePitoli ngexesha ekhokhela ugwayimbo oluchasene nokusetyenziswa kwe-Afrikaans kweliziko naye wafumana isigwebo esibumila-kunje kungoku nje ngo 15 EyoMdumba uzakugqiba unyaka ehleli ngendlu.
Tagged #FeesMustFall, Durban University of Technology